rikooo အပေါ်အကောင်းဆုံး a380?
rikooo အပေါ်အကောင်းဆုံး a380?3နှစ်ပေါင်း4months ago #522
ကိုယ်ရသင့်သော a380 မည်သူမဆိုသိကြပါသလား
rikooo အပေါ်အကောင်းဆုံး a380?3နှစ်ပေါင်း4months ago #525
မဟုတ်သလိုသေချာငါပေးသော Simulator ကိုများအတွက်, သငျသညျအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသို့မဟုတ် payware ဆိုလိုပါနဲ့ ... ဒါကြောင့် get?
, တစ်ဦးတည်းသာ-Project မှအဲယားဘတ်စ် A380 အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲရှိပါတယ်။ Payware, သူတို့ကိုအများကြီး ... Wilco, AFS ... ပင်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုမှတ်မိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
rikooo အပေါ်အကောင်းဆုံး a380?3နှစ်ပေါင်း4months ago #535
အဘယ်သူမျှမ။ ဒါကြောင့်အရမ်းရယ်ရတယ်ဘိုးအင်းနှင့်အတူလိုက် ....... အဲယားဘတ်စ်င်
rikooo အပေါ်အကောင်းဆုံး a380?3နှစ်ပေါင်း4months ago #536
ဒါမှမဟုတ် Gh0st ပြောသလို Boeing 747 ကိုသွားချင်ရင်တစ်ခုခုလိုချင်တယ်
ငါပယ်ကိုသိသောနီးပါးအားလုံးဆင်းမ်များအတွက်, အဲယားဘတ်စ်လေယာဉ်ရုံအသုံးမကျဖြစ်ကြသည်။ ငါနှစ်ပေါင်းတစ်ဦးသေဆုံးခဲယဉ်းအဲယားဘတ်စ်ပန်ကာကြီးနှင့်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်း, အဲဒါကိုအပေါ်မှာငါ့နောက်ကျောကိုဖွင့်ခဲ့ကြရသည်။
အဲဒီလေယာဉ်ဘိုးရင်းများကဲ့သို့တူညီသောလမ်းကိုတီထွင်, ဒါပေမယ့် ... တစ်ဦးရှည်လျားသောရိုက်ချက်င်ကြည့်ဖို့တိုက်ရိုက်အပျော်ရွှင်ဆုံးလူကိုဖြစ်လိမ့်မည်။
rikooo အပေါ်အကောင်းဆုံး a380?3နှစ်ပေါင်း4months ago #537
သူမသည် 1970 ကတည်းကထုတ်လုပ်မှုရဲ့; သူမသည် 1986 ကတည်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသမ္မတများအတွက်အဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်ရဲ့; သူမသည်မျက်စိပေါ်မှာအစစ်အမှန်လွယ်ကူပါတယ်; သင်သည်လက်ျာမော်ဒယ် get လျှင် (ဤနေရာတွင် Rikoooo အပေါ်သူတို့, မတစ်ဦးက Moderator, တစ်ဦးလေယာဉ်မှူးအဖြစ်ငါ့ကိုမှလာငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မကောင်းတဲ့စကားလုံးမပြောနိုင်ပါဘူး, ထိုင်), သူမအိပ်မက်နဲ့တူကိုင်တွယ်;
Long ကဘုရင်မကြီး Live! (ဟဲသော 747)